Wareega Sadexaad Wada Xaajoodka Dowladda Soomaaliya Iyo Somaliland Oo Ka Furmaya Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ankara, Mareeg.com: Wada hadalka u dhaxeeya dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka gooni isu taaga ah ee Somaliland ayaa lagu wadaa iney saacadaha soo socda ka furmaan dalka Turkiga.
Labada wafdi ee dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland uga qeybgelaya wada hadalka ayaa gaaray dalka Turkiga.
Wefdiga ka socda dowladda Soomaaliya waxaa horkacaya sii hayaha xilka wasiirka arrimah gudaha iyo amniga qaranka, C/kariin Xuseen Guuleed, waxeyna xalay gaareen magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Wafdiga ka socda maamulka Somaliland waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha debadda maamulkaas Maxamed Biixi Yoonis, waxeyna todobaadkii lasoo dhaafay tababar la xiriira sida loo galo wada xaajoodka ku qaateen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Xildhibaan C/samad Macallin Maxamuud oo ka mid ah ergada ka socota Soomaaliya, ayaa sheegay in shirku manta ka frumayo magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga.
“Wada hadalladu waa kuwa ku saleysnaan doona amba-qaadka qodobbadii heshiiskii ugu dambeeyey, waxaan rajeynayaa in ay ka soo bixi doonaan natiijo ay Ummadda Soomaaliya ku faraxdo, walaalaheena Somaliland diyaar ayeey u yihiin wax wada qabsi iyo is afgarad” ayuu yiri Xildhibaan C/samad Macallin Maxamuud.
Horay ayey labada dhinac dalka Turkiga ugu yeesheen labo wareeg oo wada xaajood ah, waxaana kazoo baxay qodobo dhowr ah inkastoo aan la guda eglin arrinta salka u ah khilaafka jira oo ah Somaliland oo dooneysa iney ka go’do Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya oo arrrintaas diidan.